Kalfadhigii Wakiilada Kililka oo ka Furmay Jijiga! – Rasaasa News
Jijiga, July 15, 2014 – Kalfadhigii 9aad ee golaha wakiilada Maamulka Kililka oo ka furmay magaalada Jijiga July 14, 2014, ayaa la hor keenay qodobo uu maamulku soo diyaariyay oo kala ah; ansixinta lix qodob , dhagaysadka afar warbixinood  iyo maqalka labo wareegto  oo wax laggaga badalay wakaalado sii jiray.
Tirda golaha wakiilada ee kulanka jooga ayaa tiradooda lagu sheegay 152 xubnood oo ka mida tirada guud ee xildhibaanada Kilalka oo ah 167 xubnood.
Kulankan oo ku yimid si kadisa, sida la sheegayna ay masuuliyiintii maamulka Kilalku ku kala maqan yihiin gabalada iyo iyada oo lagu jira bisha Ramadaan. Lama garanayo sababta keentay kulanka, laakiin waxaa jira wufuud ka socota dawlada dhexe oo jooga Kilalka.
Qoddobada horyaala xildhibaanada Kililka ee loogu yeedhay in ay dhagaystaan ka dibna ansixiyaan ayaa ah kuwan;
1. Dhagaysadka warbixinta waxqabadka xafiiska golaha xildhibaanada DDSI
2. Dhagaysadka warbixinta waxqabadka xukuumada DDSI ee SM 2006
3. Dhagaysadka warbixinta waxqabadka maxkamada guud ee DDSI
4. Dhagaysadka warbixinta waxqabadka xafiiska hantidhawrka guud ee DDSI iyo waliba bayaano ay ka mid yihiin
1. Ansaxinta hadal qoraalkii kalfadhigii 8aad ee golaha baarlamaanka deegaanka.
2. Ansaxinta miisaaniyada guud ee sanadka 2007 oo cadadkeedu dhan yahay 6.4 Billion
3. Ansaxinta bayaanka dib u habaynta Komishinka Booliska DDSI
4. Ansaxinta bayaanka dib u aas aasida Kuliyada Maaraynta iyo Adeega Shacabka DDSI.
5. Ansaxinta bayaanka waxka badalka wakaalada ilaalinta deegaanka iyo horumarinta khayraadka macdanta iyo tamarta DDSI.
6. Ansaxinta bayaanka aas aaska Wakaalada Daraasaadka iyo Naqashadaynta iyo Dabagalka DDSI.
1. Bayaanka waxka badalka bayaanka aas aasida Wakaalada Dakhliga DDSI.
2. Bayaanka wax kabadalka bayaanka lagu aas aasay Xafiiska Dhisida iyo Kobcinta Iskaashatooyinka DDSI
Kolka aad akhrido qodobada la sheegay in ay horyaalaan xildhibaanada Kilalka, waxaad si cad u dareemi in kulanku yahay uun shimbirayahow heesa. Kolka aad akhrido qodobada kuligood way isku soo hor iyo gadaal noqonayaan, waxaa ka muuqata in hal ruux oo mirqaansan soo diyaariyay.
Golaha xildhibaanada Kililku ma laha jadwal shaqo, laakiin waxaa loo yeedhaa kolka la doonayo in wax la khaldo ama looga baahan yahay gacan taag.
FG. Tirada golaha xildhibaanada kilalku waxay ahaan jireen 184 xubnood, hadda waxaa la sheegayaa 167 xubnood. Sida muuqata waa la yareeyey tirda xildhibaanada Kilalka.